ပုံ-ယာဉ်မောင်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို – JobDescriptionSample
နေအိမ် / ပုံ-ယာဉ်မောင်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ပုံ-ယာဉ်မောင်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 298 views
နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်တွဲအလုပ်ပုံကလူ, လှေ, crawler နင်း, သို့မဟုတ်ခေါငျးရိန်းစောင့်ရှောက်မျက်နှာပြင်များနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်လိပ်ခေါင်းလုပ်ကိုင်ရန်, bulkheads, နှင့်အိမ်၏အခြေခံ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်အဆောက်အဦးများနှင့် Piers များအတွက်အဖြစ်.
အိမ်များသို့မဟုတ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့် ပတ်သက်. ထောက်ခံမှုထောက်ပံ့ဖို့လိပ်ခေါင်းမောင်း, မိုးသည်းထန်စွာတစ် piledriver ဦးခေါင်းရှိခြင်းကြောင်းလျှောက်ထားကိရိယာများ.
ခရိုနီလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်နက်နဲသောပင်လယ်မှလိပ်ခေါင်းခရီးသွားလာကြောင်း drophammers မြှင့်ခြင်းနှင့်လျှော့ချရန်အဆို့ရှင်အကူးအပြောင်း, သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သံတူလှုံ့ဆော်ရန်.
ဖြေရှင်းမည်, ဆီထည့်, replenish ကြောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်.
အခြားလူများအဘယ်သို့ပြောသည်ကိုအပေါ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက် active-နားထောင်ခြင်း-ပေး, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အချက်များကိုနားမလည်ဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်တောင်းခံကိစ္စများ, မှားဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာ mesmerizing မဟုတ်.
ထိုပြဿနာကိုညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုအချက်များကျွမ်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သော trainingPERinstructional အလေ့အထများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့ချဉ်း ကပ်. -အသုံးချပြီးနှင့်ကောက်နေသင်ယူခြင်း.
မိမိကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-OverseeingPERExamining လုပ်ဆောင်ချက်ကို, အပိုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုဖန်တီးရန်.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-ပြောင်းခြင်း devices များသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ပါတယ်ကူညီပေးဖို့နည်းပညာများ.
-ထုတ်ကုန် Installing, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုး, လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့သို့မဟုတ် applications များ.
အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. encoding-ထုတ်ဝေကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-မြင်လျှင် dial ညွှန်းကိန်း, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာလက္ခဏာများသည်လက်ရှိတွင်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်တစ်ဦးပစ္စည်းလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
functioning နဲ့ devices များသို့မဟုတ်ဂီယာ၏စီမံခန့်ခွဲ-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကို.
tools တွေအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကိုပစ္စည်းကိရိယာကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တဲ့အခါမှာအဆုံးအဖြတ်.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ဖျော်ဖြေစစ်ဆေးမှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေး, ဖြေရှင်းနည်းများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
အများဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အလားအလာဖြစ်ကြောင်းခြေလှမ်းများနှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေစျေးနှုန်းများနှင့်ကြီးသောအမှုတို့ကိုအာဏာရနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-စဉ်းစား.
စနစ်များ setting ကိုအတွက်လမ်းချိန်ညှိအားသုံးသပ်ခြင်း-ဆုံးဖြတ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အခွအေနနှင့်အတူရလဒ်များထိခိုက်စေနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်မလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လို.
Timemanagement-ကိုင်တွယ်ခြင်း oneis ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခါသမယနှင့်အတူအခြားသူများ၏အခါသမယ.
သူတို့အဖြစ်အမှုထမ်းအရင်းအမြစ်များ-ရည်ရွယ်ချက်လူများ၏အုပ်ချုပ်ရေး, ကို, နှင့်အလုပ်အားပေးအားမြှောက်, task ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးကွဲပြားခြားနားသွား.
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, အထိ 24 လနှင့်အပါအဝင်
အောင်မြင်ခြင်း / ကြိုးစားခြင်း – 86.51%
ဇှဲကောငျးခွငျး – 87.04%
အကွောငျးရငျး – 87.33%
အမိန့် – 84.93%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 85.41%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 87.14%
လူမှု Alignment – 86.17%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 87.75%
ဖိအား Threshold – 88.81%
မှီခို – 92.18%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 90.15%
ခွန်အား – 84.71%
လွတ်လပ်ရေး – 84.46%
သစ်လွင်မှု – 88.28%
analytical အတွေးအခေါ် – 87.67%
ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က Operate (MRI) ရုပ်ပုံများ. လူနာလုံခြုံရေးနှင့်နှစ်သိမ့်စောင့်ကြည့် . Might render gadolinium contrast …